ATAOVY TOY NY TANY AMPIANDOHANA
Ataovy toy ny tany ampiandohana,
Ny fiarahanao amin’ny olon-tianao.
Tena tsotra madio ary tsy isalasalana,
Ny fitiavana izay nitsiry tao am-ponao
Ny teny sy ny tsiky hita eo imolotrao.
Tena maha-te ho tia ary mahasalama,
Satria mandeha ho azy ny zavatra atao
Ny sangisangy sy ny zava-panao.
Na mafana ny andro na koa mamanala,
Tsy hiova mihitsy ary tsy hisy ho lao.
Ataovy ho toy ny tany ampiandohana,
Tena tokam-po toa ny siny tokoa ianao.
Ka na any ampiasana na ao an-tanàna,
Dia hifampiantso foana hoe aiza ianao ?
Ny adiadiady kely izay mora hadino,
Tsy ho tra-maraina ary mora ialàna,
Satria hanimba ka mety tsy hampino.
Ifampiaràna foana ny zavatra hatao.
Tena ho mafy orina toy ny làlàna,
Ilay tokantrano mamy izay naorinao.
Ny fitadiavanao ny vady andefimandrinao.
Tsy andry mihitsy izay hifankahitana,
Eny satry foana ny hihaona izao dia izao.
Ny fivavahanao ho an’ny olon-tianao.
Ho lavitra azy foana ny asan’ny satana,
Fehiny : ho sambatra foana izy sy ianao.
Sokajy : fananarana, fiainana, Fianakaviana, Fitiavana